भुकम्प के हो ? यो कसरी आउँछ ? के अझै नेपालमा भुकम्पको खत्रा छ ?
९० सालपछि अहिलेको भूकम्प सबैभन्दा ठूलो हो । यसलाई रिटर्न पिरियड भनिन्छ । भूकम्पको भविष्यबाणी हुँदैन अहिलेसम्म संसारमा भूकम्पकोभविष्यबाणी कसैले गर्न सकेको छैन । यो गर्न पनि सकिँदैन । सिद्धान्ततः विज्ञानले भविष्यबाणीलाई अस्वीकार गर्छ । भूकम्पको भविष्यबाणी गर्ने कुनै प्रविधिको विकास भएको छैन । सायद अब हुन पनि कठिन छ । अनुमानसम्म गर्न सकिएला । जापान र चीनमा सर्पहरु एकैपटक दुलाबाहिर आए भने, आकाशमा ठूलो संख्यामा चरा उडे भने, कुकुर भुक्यो भने, गाइवस्तु करायो भने भूकम्प आउन लागेको अन्ुमान गरिन्छ । तर विज्ञानले ती घटनालाई भूकम्प आउने संकेतका रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन र होइन पनि । कुनैबेला संयोग परेको भए बेग्लै कुरा हो । अहिले जसरी भूकम्पका विभिन्न भविष्यबाणी भइरहेका छन्, ती सबै निराधार हल्ला हुन् । यस्तो गलत हल्लाको पछि लाग्न जरुरी छैन । भूकम्प कहिले आउँछ र कति क्षमताको आउँछ भन्ने कुरा संसारमा मै हुँ भन्ने वैज्ञानिकले समेत गर्न सकेका छैनन् । भूकम्प तीन चरणमा आउँछ । पहिला पूर्वसंकेतका रुपमा सानो आउँछ । त्यसको झड्का महसुस गर्न सकिँदैन । दोश्रो चरणमा आउने मुख्य झड्का हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मोहन वैद्यबीच भेट
One thought on “भुकम्प के हो ? यो कसरी आउँछ ? के अझै नेपालमा भुकम्पको खत्रा छ ?”
Pingback: जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएकाहरुले पनि अब भुकम्प पिडिति राहत पाउने | Suchana Khabar